सलमानका पिता सलिमले भने- ‘सलमानले यस कारण उनले कहिल्यै बिहे नगर्ने फैसला……. – Khabar Patrika Np
सलमानका पिता सलिमले भने- ‘सलमानले यस कारण उनले कहिल्यै बिहे नगर्ने फैसला…….
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फाल्गुण २१, २०७७ समय: २०:२१:०५
काठमाडौं / बलिउड सु प र स्टार सलमान खान हरेकको दिलमा राज गर्ने व्यक्ति हुन् । उनको फ्यानको उनीप्रतिको क्रेज यस्तो छ कि सलमानको जुनसुकै फिल्म रि लि ज भएपनि सुपरहिट भइहाल्छ । बलिउडमा उनको सफलताको आजपनि ग्यारेन्टी जस्तै नै छ । उनी अभिनीत पछिल्लो फिल्म ‘भारत’ हो ।सलमानलाई वर्षौदेखि प्र;शंसकहरुले एउटा प्रश्न पटक-पटक गर्ने गरेका छन्- ‘कहिले बिहे गर्ने ?’
उनको बिहेको विषयलाई लिएर अनेक अ;न्दाज लगाइएको पाइन्छ । कहिले सलमान कैटरीनासँग, कहिले यूलियासँग बिहे गर्दै भन्ने हल्ला फैलिरहेको छ । तर, वा:स्तवमा नै उनले कहिले बिहे गर्छन् कसैलाई थाहा छैन । सलमानको पारिवारिक सुत्रको अनुसार, सलीम खान (सलमानका पिता) ले भनेका छन्,
‘सलमानलाई बिहेको द’बाब नदिँदा नै राम्रो हुन्छ किनकी उसले जीन्दगी भर एक्लै रहने फैसला गरिसकेको छ ।’ऐश्वर्यासँग ब्रे’कअप भएपछि सलमानको माया–प्रेममा वि”श्वास लाग्न छाडेको बताइन्छ । यस का’रण उनले कहिल्यै बिहे नगर्ने फैसला लिएका हुन् ।
यो पनि जोमसोम : बेनी-जोमसोम सडक खण्डमा मंगलबारदेखि दैनिक ६ घण्टा ब’न्द हुने भएको छ । यो नि:र्णयसँगै मुस्ताङ प्र:वेश गर्ने र बाहिरिने सबै सवारी साधनलाई सडक नि:र्माणको क्रममा रोक लगाइने छ। राष्ट्रिय गौरवको बेनी/जोमसोम ७६ किमी नि:र्माणधिन सडकलाई गतिदिन यो नि:र्णय भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
जसअन्र्तगत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-१ को तिप्ल्याङ क्षेत्र, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३ को बादरजुङ्गे भीर र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका-४ को घाँसा देखि लेतेसम्मको निर्माण धिन सडकको कामलाई बाधा नपुग्ने गरी दैनिक सडक बन्द गर्ने नि:र्णय भएको बेनी-जोमसोम सडकका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले जानकारी दिए।
सडक सुपरभाईजर शेरचनले अन्नपूर्णलाई दिएको जानकारी अ:नुसार अब दैनिक बिहान ७ बजे देखि ११ बजेसम्म र दिउँसो साढे २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म सडक नि:र्माणको काम हुनेछ। सो समयमा या ता या त ठप्प हुनेछ। बेनी-जोमसोम सडक ४ प्याकेजमा काम भइरहेको छ । नि:र्माण कम्पनीले म्याग्दीको अन्नपूर्ण -३ र मुस्ताङको थासाङ-४ को सीमाक्षेत्रमा पर्ने बादर जुङ्गेभीरमा सडक चौडा गर्नका लागि र क क टि ङको काम गरिरहेको छ।
यस्तै, अन्य स्थानमा माटो फिलिङ गर्ने, वाल लगाउने र नाली नि:र्माण गर्ने काम भइरहेको सुपरभाइजर शेरचनले बताए । राष्ट्रिय गौरवको बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको काम २०७४ सालबाट सुरु भएको हो । बेनी-जोमसोम ४ खण्ड र जोमसोम-कोरला ७ खण्डमा काम सुरु गरिएको हो।